ချီးမြှင့် အဆောင်အယောင်များနှင့် ဆုကြေးပြန်လည် အပ်နှံရန်နှင့် National Director ဒေါ်စိုးယုဝေအား တောင?? - Yangon Media Group
မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ရွှေ အိမ်စည်သိရှိစေရန်ဟူ၍ Hello Madam Media Group Co.ltd ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဒေါ်စိုးယုဝေမှ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် နေ့တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှတစ်ဆင့် ကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ”ကျွန်မရဲ့ သဘောထားအကုန်လုံးကို ကြေညာချက်များ ထည့်သွင်းကြေညာထားပြီးသားပါ”ဟု Miss Universe Myanmar Organization rS National Director ဒေါ်စိုးယုဝေက ပြောသည်။
ယင်းကြေညာချက်တွင် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့၌ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာ ၂ဝ၁၇ ပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆု ရရှိထားသူ မရွှေအိမ်စည်အား နိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်အဖြစ် သွား ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် စေလွှတ်ရန် ရှိခဲ့သော်လည်း (၁၄. ၁ဝ.၂ဝ၁၆) ရက်စွဲပါ သဘောတူညီမှုစာချုပ်တွင်ပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်အချို့ကို မရွှေအိမ်စည်မှ ချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းအား စေလွှတ်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး မယ်စကြဝဠာ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းမှ ချီးမြှင့်ထားသည့် အဆောင်အ ယောင်များနှင့် လက်ခံထားသည့် ဆုကြေးငွေများအား ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ဝ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပြန်လည်အပ်နှံရန်ကြေညာခဲ့သော်လည်း ယနေ့အချိန်ထိအပ်နှံမှု မရှိခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများတွင်လည်း ကောင်း၊ စာနယ်ဇင်းမီဒီယာ အသီးသီးတွင်လည်းကောင်း၊ မယ်စကြဝဠာ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တာဝန်ခံနှင့် Hello Madam Media Group Co.ltd ၏မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဒေါ်စိုးယုဝေအား အများပြည်သူအထင်အမြင် လွဲမှားစေရန် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်း စေရန်ရည်ရွယ်ပြီး မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုရေးသားမှုများ၊ ပြုလုပ် ခြင်းများကြောင့် ဒေါ်စိုးယုဝေအား ဝန်ချတောင်းပန်ရန်နှင့်အတူ ချီးမြှင့်ထားသောအဆောင်အ ယောင်များကို ခုနစ်ရက်အတွင်း ပြန်လည်အပ်နှံရန် ကြေညာထားသည်။
မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ရွှေအိမ်စည်ဘက်မှ ကြေညာချက်ထုတ်ကာ တောင်းဆိုထားမှုများကိုလည်း တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။ ”အိမ်စည့်ဘက်ကတော့ လုပ်စရာရှိတဲ့အပိုင်းကို ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ သူတို့ဘက်ကို လုံးဝ တောင်းပန်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ အိမ်စည်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတရားစွဲတာကိုလည်း ဆက်လုပ်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ဆုကြေးတွေ ပစ္စည်းတွေကို အိမ်စည်ဘက်က တမင်ကိုမအပ်ခဲ့တာပါ။ သူတို့ ဘက်ကမှားနေလို့ အိမ်စည်က တရားစွဲပါတယ်ဆိုမှ သူတို့တောင်းဆိုတာကို လုပ်ပေးစရာလား”ဟု ပြောသည်။ Miss Universe Myanmar Organization သည် ၂ဝ၁၃ ခု နှစ်မှစတင်၍ မယ်စကြဝဠာမြန်မာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲများကို ပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ယခုအခါတွင် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အနေဖြင့် အလှမယ်နှင့် Organization အကြား ပြဿ နာပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆရာဝန်၏ အကြံပြုချက်ကြောင့် ဘေးလ်ကိုချန်လှပ်ခဲ့ဟု ဇီဒန်းရှင်းလင်း